Gaadiidka TCDD Co. Xeerka Gudiga kormeerka agaasinka guud ee la daabacay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraGaadiidka TCDD Agaasimaha Guud ee Guddiga Kormeerka Guud Published
17 / 04 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, TURKEY, Gaadiidka TCDD
gaadiidka tcdd sida maamulka guud ee agaasimaha maamulka
GAADIIDKA TCDD INC. MAGACA DHISMAYAASHA XILDHIBAANKA SARE
ARTICLE 1 - (1) Ujeeddada Nidaamkan waa in la hubiyo in TCDD Taşımacılık A.Ş. Agaasimaha Guud waa inuu xakameeyo ururka, waajibaadka, awoodaha iyo masuuliyadaha iyo mabaadi'da shaqada iyo habka Guddiga Kormeerka.
QODOBKA 2 - (1) Xeerarkan waxaa diyaariyay TCDD Taşımacılık A.Ş. Waajibaadka Madaxa Guddiga Kormeerka, Kormeeraha, Kormeerayaasha, Kormeerayaasha, Kormeerayaasha iyo Kormeerayaasha, Kormeerayaasha Guddiga Kormeerayaasha, Kormeerayaasha iyo Baarayaasha Heerkani wuxuu daboolayaa habraacyada shaqada iyo mabaadiida kormeeraha madaxa, kormeeraha iyo kaaliyaha kormeerayaasha.
ARTICLE 3 - (1) of this Regulation, 8 / 6 / 1984 taariikhaysan 233 No. Qadarka, 22 / 1 / 1990 taariikhaysan 399 la Qadarka 24 No. Law / 4 / 2013 taariikhaysan 6461 Turkey No. Law on Xorreynta ee gaadiidka Tareenka diyaariyay sida waafaqsan qodobbada.
QODOBKA 4 - (1) Xeerarkan;
a) Guddoomiyaha: Gaadiidka TCDD Madaxa Guddiga Kormeerayaasha,
b) Madaxweynenimo: TCDD Transportation. Agaasimaha Guud ee Guddiga Kormeerka,
c) Xafiiska: Xafiiska Kormeerka,
j) Shaqaalaha xafiiska: Madaxa iyo saraakiisha xafiiska,
d) Maamulaha Guud: TCDD Taşımacılık A.Ş. Maareeyaha Guud,
e) Agaasimaha Guud: TCDD Taşımacılık A.Ş. Agaasimaha Guud,
f) KPSS: Imtixaanka Xulashada Shaqaalaha Dadweynaha,
g) Kormeeraha: Kormeeraha, Kormeeraha, Kormeeraha iyo kaaliyaha kormeerayaasha,
j) Kormeeraha Kormeeraha: Kormeerayaasha loo xilsaaray inay caawiyaan Guddiga Kormeerayaasha,
h) Shirkadda: Waaxda Gaadiidka TCDD,
i) Maamulaha Laanta: Maamulaha Shirkadda Guddiga Kormeerayaasha,
i) The Republic of Turkey State Tareennada TCDD Gaadiidka Inc:. General Directorate of Company Stock Gaadiidka Joint,
j) Guddiga Kormeerka: TCDD Taşımacılık A.Ş. Agaasimaha Guud ee Guddiga Kormeerka,
Ururka, Waajibaadka iyo Awoodaha
Sameynta Guddiga Kormeerayaasha
QODOBKA 5 - (1) Guddiga Kormeerayaasha; Madaxweynuhu wuxuu ka kooban yahay kormeerayaal, kormeerayaal, kaaliyaha kormeerayaasha, maamulaha laanta iyo shaqaalaha xafiiska.
Ururka iyo ballanqaadka
QODOBKA 6 - (1) Guddiga Kormeerayaasha ayaa si toos ah ugu xiran Maareeyaha Guud. Madaxweynuhu wuxuu fulinayaa waajibaadkiisa, iyadoo kormeereyaashu ay sameyn doonaan kormeer, baadhitaan iyo baaritaanno oo ka wakiil ah Maamulaha Guud.
(2) Dhammaan shaqooyinka Guddiga Kormeerayaasha qoraal ahaan, xisaabaadyada, dukumintiyada, maktabadaha iyo arrimaha la midka ah iyo jawiga xisaabinta waa inay fuliyaan Agaasimuhu waafaqsan guddoonka Baaritaanka.
QODOBKA 7 - (1) Xarunta Guddiga Kormeerayaasha waa Ankara. Xaruntan sidoo kale waa xarun muhiim ah ee kormeerayaasha.
(2) The Board of Baadhayaashu, si ay u siiyaan kormeerka iyo kormeer joogto ah by ansixinta Agaasimaha Guud, kormeerayaasha ku adkayn kartaa xarumood oo ku yaalla hawl kasta degmada baahan pacemaker ah.
Waajibaadka Guddiga Kormeerayaasha
QODOBKA 8 - (1) Waajibaadka guddiga kormeerku waa sida soo socota:
a) Kormeerka ee wax ku ool ah si loo ogaado mabaadi'da fulinta Agaasinka Guud ee jihada mabaadii'da guud qaatay ku saabsan anshaxa, baaritaan lagu qaban doonaa by kormeerayaasha, dib u eegista iyo hagaajiyo dariiqooyinka iyo farsamooyinka la xidhiidha baadhitaanka, caadiga ah iyo in la hubiyo in la aasaaso tilmaamaha, si ay u diyaariyaan hubinta la'u, hagaajinta waxtarka kormeerka iyo hufnaan tallaabooyinka qaadan, in ay bixiyaan fikrado iyo talooyin ku saabsan arrintan iyo shaqaalaha yididiilo leh si loo hagaajiyo hawlaha hufan ee nidaamka kormeerka.
b) Inay fuliyaan dhamaan noocyada baaritaanka, baaritaanada iyo baaritaannada ku jira qeybaha dhexe iyo kuwa gobollada ee Agaasinka Guud.
c) Inuu soo jeediyo qorshe ku saabsan sida loo hirgelin karo sharciyada ku saabsan waajibaadka Agaasinka Guud iyo cilladaha iyo cilladaha loo cayimay.
d) Agaasinka Guud gacan ka xaqiijinta ku haboon si tayo leh ahdaafta iyo ujeedooyinka hawlaha, si loo soo saaro xal u hesho dhibaatooyinka kala kulantay dhaqanka, qiimeeyaan wax ku oolnimada of Agaasinka Guud ee siyaasadda, hababka dhaqanka iyo in ay bixiyaan jeedinta kale samaynaya falanqaynta on natiijada, si ay u bixiyaan unugyada General Directorate of si fiican loo fahmo oo ka mid ah siyaasadaha cusub si ay shuqulka qabto.
Magacaabista Guddoomiyaha Guddiga Kormeerayaasha
ARTICLE 9 - (1) Guddoomiyaha Guddiga hawlahooda u, oo ay ku jiraan kaaliyaha kormeeraha at the Board of Baadhayaashu ugu yaraan 5 sano waxaa loo xilsaaray kormeerayaasha adeegyada kormeerka.
Xilka, Awooda iyo Mas'uuliyadaha Guddoomiyaha Guddiga Kormeerayaasha
QODOBKA 10 - (1X) Gudoomiyaha wuxuu leeyahay awoodda iyo awooda kormeeraha oo wuxuu fuliyaa waajibaadka soo socda:
a) In la fuliyo waajibaadyada ku xusan qodobka 8 oo ku hadlaya magaca Maareeyaha Guud oo leh amar iyo ansixin Maamulaha Guud.
b) Si loo maareeyo Guddiga Kormeerka iyo kormeerida iyo kormeerka shaqada Shaqaalaha Kormeeraha iyo shaqaalaha laanta xafiisyada.
c) Kormeeridda, baarista iyo sameynta baaritaanada sida ugu muhimsan.
j) Diyaarinta Barnaamijka Kormeerka Sanadlaha ah oo u gudbinta ansixinta Maareynta Guud iyo xaqiijinta fulinta barnaamijka.
d) baaro wararka ka kormeerayaasha ka, si loo hubiyo in tirtiridda dhiman, haddii ay jiraan, kormeerka, dib u eegidda, iyo qiimaynta warbixinta baaritaanka, annaga oo ogaaney opinion ee Madaxweynaha on natiijada waxana ansixinaya Maareeyaha Guud iyo warar sheegaya in ay u diraan si ay u Agaasinka Guud ee unit ay khusayso ansixiyey, tallaabooyinka in la qaado iyo in ay la socdaan natiijooyinka tallaabooyinka la qaadayo iyo tallaabooyinka in la qaado talooyin.
e) In la dhiiri geliyo inay sameeyaan xirfado Baadhayaashu la xiriira shaqada sayniska, ee dalka for kormeerayaasha ujeedadaas oo u siiyaan waxbarasho iyo cilmi dibadda, xirfadda, dhaqanka guud iyo in la kordhiyo aqoonta afafka qalaad, tababar xirfadeed, koorsooyinka, siminaaro, shirar, kormeerka iyo hanti- adeeg si loo hubiyo in ay ka qayb barnaamijka shahaado heer qaran iyo heer caalami ah.
f) In la qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah in la qoro kaaliyaha kormeerayaasha iyo in loo fidiyo in la tababaro muddada saddexda sano ah ee gargaarka.
g) Tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo hubiyo midnimada ra'yiga iyo hirgelinta kiisaska sharcigu u fasirayo si ka duwan inta u dhaxaysa kormeerayaasha.
h) ee arrimaha gudahood ay ragu wado, indhaynta samaynta iyo arrimaha cilmi-baarista la xiriira hirgelinta carqalad ama failure iyo sharciga taasoo keentay in la qaado si loo soo jeedinta Hay'adda Agaasinka Guud yaptırarak tallaabooyin.
h) In la xaqiijiyo diyaarinta iyo hirgelinta tilmaamaha iyo tilmaamaha si loo hubiyo midnimada hirgelinta dhammaanba howlaha Guddiga Kormeerayaasha.
i) Inay fuliyaan waajibaadyo kale oo la xiriira adeegyada kormeerka ee Agaasimaha Guud.
Caawinta Guddiga Kormeerayaasha
QODOBKA 11 - (1) Guddoomiyaha wuxuu magacaabi karaa tiro ku filan oo kormeerayaal ah si uu u caawiyo isaga oo ansixinaya Agaasimaha Guud.
Guddoomiyaha Guddiga Kormeerka
ARTICLE 12 - (1) Madaxweynuhu waa ku meel gaar ah oo sidaas daraaddeed tago hawsha wakiil xafiiska in mid ka mid ah kormeerayaasha wehel ah, halka kormeere wehel loo qoondeeyey lagu qiimeeyo ama hawl u fulin karin si ku meel gaar ah sababaha siinayaa kormeere hoosaadyo ku haboon.
Waajibaadka, masuuliyiinta iyo masuuliyadaha kormeerayaasha
QODOBKA 13 - (1) Kormeerayaasha, oo ka wakiil ah Maareeyaha Guud;
a) barnaamijyada Inspection ama tilmaamaha barnaamij ka mid ah wax soo saarka iyo adeega unugyada shirkadda la kormeerka ee beeraha kale ee hawlaha of Company waxaa ku lifaaqan, iyo in ay soo bandhigaan natiijooyinka kormeerka iyo baaritaanka wararka ee Madaxweynaha,
b) Wargelinta Madaxwaynaha marka la eego kormeerka, kormeerka iyo falalka uu isagu / iyadu arko ama bartay intii uu socday baaritaanka,
c) haddii loo baahdo inta lagu guda jiro fulinta hawsha, nooca dhexe iyo gobolka ee shirkadda la siiyaa ilaalinta ee ka tirsan qaybta, lacagta caddaanka ah, securities-ka iyo guryaha kireeya inay tiriyaan on jiritaanka dhammaan noocyada kala duwan, haddii qarsoon waxaa iska leh iyaga in ama aan wax documents, files, waraaqaha iyo electronic, magnetic, iyo macluumaad kale oo in la baaro ama xogta laga deegaanka Kombuyuutarada ah ka helaan, si aad u dhegaysanayay by tegaayo koobi certified dukumentiyada ama nuqul,
j) Inaad ka saarto shaqaalaha ku habboon waajibaadka ku xusan mabaadiida ku xusan Xeerkan,
d) Inuu codsado qoraallada qoraalka ah ama hadal ee dadka ay u baahan yihiin inta lagu jiro xilkooda,
e) Haddii ay lagama maarmaan, shaqaalaha loo qoondeeyey fasax sannadeed ka ganacsiga, marka la eego ganacsiga waxaa loo ogol yahay inuu ku soo laabto ka hor dhamaadka shaqeeyaan haddii booqashada khasabka ah, weydii caleema saarka madaxda goobta shaqada,
f) si aad u codsato shaqaalaha ka awood karti si ay u faa'iidaystaan ​​unugyada shirkadda ee sida khabiir ku ah haddii loo baahdo, edit goobta shaqada iyo barnaamijyada, guddiga u soo jeediyaan ee Baadhayaashu xaaladaha u baahan khabiir ka baxsan shirkadda magacaabay,
g) xarunta oo beerta unugyada The Company ee, kaas oo la bilaabay in kormeerka, baaritaan, iyo haddii ay waxaa loo doortay baaritaan, macluumaadka iyo dukumentiyada la xiriira horay u sameeyay waxbarashada si aad u ogaato haddii ay lagama maarmaan ay ula wareegaan, waxaa la qaban doonaa inay keenaan warbixinta si Madaxtooyadda,
ğ) Si loo siiyo tababar ku caawiya kormeerayaasha la socda, iyo inay ku wargeliyaan Madaxa Xafiiska oo leh waraaq qarsoodi ah oo ku saabsan shaqadooda, wax ku oolnimada, dabeecadda iyo habdhaqanka.
h) baadhitaanka, baaritaanno iyo weydiimaha inta lagu guda jiro fulinta mabaadi'da sharciga, maamulka iyo maaraynta, iyo hababka baabi'inta ka dhiman iyo ceebaha arkay marka la eego shaqo iyo soo jeediyaan dhinaca si joogta ah u qaadeen,
i) Inuu fuliyo waajibaadyo kale oo Madaxweynenimo,
Waxay leeyihiin waajibaad iyo awood.
(2) Kormeerayaasha ayaa ka mas'uul ah daraasadaha ay diyaariyeen iyo warbixinnada ay diyaariyaan.
(3) Waxaa macquul ah in kaaliyeyaashu ay awood u leeyihiin inay isticmaalaan awoodahaan ama inay si madax-bannaan u gutaan waajibaadkooda.
ARTICLE 14 - (1) Baarayaasha ballanqaadayso CEO iyo adeega tilmaamaha ka Board hawlahooda u helay ansixiyo Madaxweynaha iyo awoodaha iyaga lagu soo dhiibay hoos xeerkan, waxay isticmaalaan waxaa meel kasta oo ay xilsaaray ka wakiil ah Maareeyaha Guud.
(2) Maareeyaha Guud ayaa u xilsaaray awoodda inuu u magacaabo Guddoomiyaha Guddiga Kormeerayaasha si loo ogaado xadaddiisa iyo arrimaha.
(3) Kormeerayaasha laguma dalban karo meel kasta oo aan ka aheyn Maamulaha Guud iyo Guddoomiyaha.
Ku hoggaansanaanta kormeerayaasha
QODOBKA 15 - (1) Kormeerayaasha;
a) Halka ayan u dhaqmin sida habka loo yareeyo sharafta iyo kalsoonida looga baahan yahay waajibaadkooda iyo tilmaamaha,
b) Aan la faragelin fulinta dilka,
c) Shaacinta dukumiintiyada, buugaagta iyo diiwaanada, oo aan ahayn wax sax ah,
(d) aan la samayn xiriirin khaas ah oo lala yeesho dadka ku xiran kormeerka ama baaritaanka, marka laga reebo sida looga baahan yahay xiriirka aadanaha;
d) Inaysan ka bixin macluumaadka qarsoodiga ah iyo dukumeentiyada ay ku heleen sababtoo ah waajibaadkooda, hawlaha iyo waajibaadka;
e) Oggolaanshaha Madaxtinnimada imaanshaheeda iyo ka tagida meelaha ay u socdaan kormeer, kormeer iyo baaritaan,
f) Bixinta macluumaadka Madaxa-bannaan iyadoo la tixgelinaayo in kormeeridda, baarista iyo baaritaanka aan la kala gooyin, dib loo dhigin oo loo fulin lahaa si joogto ah, sidoo kale waxay caddeeyeen sababaha shaqada aan la dhammaystiri karin iyo
g) La socodsiinta Madaxtooyada ee xaaladda haddii natiijada shaqooyinka ay bilaabaan ay ku xiran tahay baaritaanka iyo baaritaanka meelo kale,
Waxaa looga baahan yahay.
ARTICLE 16 - (1) Inspection Services kormeerayaasha u habaysan sida xirfado gaar ah ka takaaliif ah ee kale maamulka caafi aan waafaqsanayn shuruudaha qasab ama adeegyada kormeerka, waa la helay in ay ku filnaan la'aanta anshaxa ama xirfadeed ee casaan ma noqon karo, in aan la magacaabin in ay hawlo kale maamulka.
(2) naafanimada, naafada ama naafada shaqada; go'aanka garsoorka, warbixinta guddiga caafimaadka, warbixinta kormeeraha, sida dukumeentiyada ayaa muhiim ah.
QODOBKA 17 - (1) Kormeerayaasha;
a) Waa mid aan ku habooneyn in uu ku sii jiro waajibaad,
b) waraaqaha iyo securities in lacag iyo shuruudaha lacagta, dhammaan noocyada kala duwan ee badeecadaha iyo alaabada, xisaabaadkooda, si ay u muujiyaan in uu waraaqaha iyo buugaagta iyo fogaado jawaabay su'aalo ayaga ku saabsan, kormeerka, baaritaan iyo dhimi doono baaritaanka ama ku lug leh dhaqanka in looga hortago doonaa,
c) wuxuu u dhaqmaa si waafaqsan Qodobbada 19 ee 4 / 1990 / 3628 taariikhda 17, Baaqa Badeecadda, La-dagaallanka Falalka Lidka Xoolaha iyo La-dagaallanka Musuqmaasuqa,
j) Dukumiintiyada iyo diiwaangelinta been-abuurka ah,
d) Tilmaamo xooggan oo sheegaya in isaga / iyada ay waxyeelo weyn u geysan doonto dadka iyo hantida goobta shaqada,
(2) Qadar goyn ayaa la qaadi karaa marxalad kasta oo kormeer iyo baaritaan. Si kastaba ha noqotee, waa in si cad loo qeexaa in qofka la eryey uu leeyahay faa'iido darro iyo in qodobka ku xusan faqrada (b) ee cutubka koowaad waa in la go'aamiyaa daqiiqad.
(3) Waa in si degdeg ah loo ogeysiiyaa Maareeyaha Guud, Gudoomiyaha Guddiga Kormeerayaasha, sarkaalka loo idmaday ballanta iyo walbaha kale ee uu hayo kormeeraha.
(4) kormeerka iyo baaritaanka dhamaadka laga saaray xafiiska la eego dacwada ama dembiyada ee ay ka saareen tallaabooyin ka qaadista u baahan qaaday isagoo fulinta shaqaalaha, qoraal ama warbixin siiyo by kormeerayaasha, loo magacaabay in ay maamulka awood deg deg ah laga saaro.
Daraasado wadajir ah
QODOBKA 18 - (1) Haddii wax ka badan hal kormeere lagu magacaabo baaritaanka, baaritaanka iyo baaritaanka, isku-duwidda shaqooyinka waxaa hubinaya ugu sareeya kormeerayaasha. Haddii ay jiraan kormeerayaasha la socda ee loo xilsaaray caawinta guddoomiyaha, isuduwaha kooxda waa kormeeraha la socda.
Dhameystirka shaqada iyo kala wareejinta shaqada
QODOBKA 19 - (1) Kormeereyaashu waa inay dhammaystiraan shaqooyinka loo xilsaaray muddada lagu qeexay Guddiga Kormeerayaasha. Waxay ku wargelinayaan Guddiga kormeerayaasha shaqooyinka la fahamsan yahay in aysan dhameystirnayn wakhtiga loogu talagalay oo ay ku dhaqmaan sida waafaqsan tilmaamaha la qaadayo.
(2) Waa lagama maarmaan in shaqada la siiyay kormeerayaasha aan loo wareejin. Haddii wareejinta la dhasho; kormeerayaashu waxay hawlahooda u xilsaarayaan kormeeraha kale iyada oo la raacayo tilmaamaha Madaxweynaha.
(3) kormeerayaasha kii arrimaha wareeggeedii ka dhigi doonaa suuqa kala iibsiga hadii ayaa bilaabay qorista, kala iibsiga ilaa iyo taariikhda shaqada lagu sameeyey waxa ay ahayd in danaha wada koobaan doonaa xamili dhammaan dokumentiyada la xiriira, shaqada aan bilaabay kaliya dhiibay in lagu qabto isaga oo ku saabsan dukumentiyada la karti leh tirada codbixinta diyaarin doonaa warqad codsi ah.
Waajibaadka, Awooda iyo Waajibaadka Maamulaha Sheybada iyo Shaqaalaha Xafiiska Guddiga Kormeerka
QODOBKA 20 - (1) Agaasimaha Laanta wuxuu ka kooban yahay Maamulaha Dugsi iyo tiro ku filan oo shaqaale ah iyadoo la raacayo amarrada Guddoomiyaha Guddiga Kormeerka.
(2) Maamulaha laanta iyo shaqaalaha xafiiska iyada oo la raacayo amarrada Guddiga Kormeerayaasha;
a) Si loo fuliyo dhammaan noocyada kala iibsiga iyo isgaarsiinta si waafaqsan amarrada,
b) Kaydinta warbixinnada soo hadhay, nuqulo iyo waraaqo isgaarsiineed oo ku yaalla Guddiga Kormeerka si joogto ah,
c) Si loo sameeyo qeybinta shaqaalaha ee qaybta shaqaalaha,
j) Si loo hubiyo kala qaybinta amarrada iyadoon la daahin,
d) Si loo fuliyo macaamilka shakhsi ahaaneed, bixinta horumarka iyo adeegyada kale ee maamulka iyo lacageed ee shaqaalaha kormeerayaasha iyo laanta laanta,
e) Si loo fuliyo nidaamyada la xiriira qalabka waraaqaha, daabacaadda iyo waxyaabaha kale ee Guddiga Kormeerka,
f) In la fuliyo hawlaha lagu qeexay sharciyada iyo waajibaadka kale ee uu Madaxweynuhu siiyo,
waa la oggol yahay oo idman.
(3) Maareeyaha Laanta iyo Shaqaalaha Maamulaha Shilka ma sheegi karaan macluumaadka ay ku soo galaan sababtoo ah waajibaadkooda. Agaasimaha Waaxda ayaa mas'uul ka ah Madaxweynaha si loo hubiyo in waajibaadka si go'an loo fuliyo, xafiisku si joogto ah ayuu u shaqeeyaa, sirqaana loo hubiyaa.
Kormeeraha Kormeeraha Kormeeraha, Kormeeridda Farsamada, Kormeeraha
Tababarka iyo Ballanta
QODOBKA 21 - (1) Si loo helo dhibicda aasaasiga ah ee lagu qeexay imtixaanka imtixaanka ee nooca KPSS ee nooca ama noocyada aan dhammaadka lahayn, oo keliya xirfad kormeerka iyo TCDD Taşımacılık A.Ş. Kormeeraha kaaliyaha ayaa loo galayaa kaaliyaha kormeere haddii uu ku guuleysto imtixaanka gelitaanka.
(2) Imtixaanka gelitaanka wuxuu ka kooban yahay laba marxaladood, qoraal iyo af. Kuwa aan ku guulaysan imtixaanka qoraalka ah looma oggola inay qaataan imtixaanka afka.
(3) Waa lagama maarmaan in marxaladda qoraalka iyo afka ah ee imtixaanka gelitaanka Kaaliyaha Baaritaanka Kormeeraha ay fuliyaan Guddiga Imtixaanka sida ku cad qodobka 27;
(4) Guddiga Baadhista looma diri karo Guddiga Kormeeraha si furan ama lacag caddaan ah, ama si kasta oo kale oo uu u sameeyo Kormeeraha Sare, Kormeeraha ama Kormeeraha. Qodobkani ma khuseeyo Guddiga Kormeerayaasha oo soo galay Guddiga Kormeerka si waafaqsan qodobbada Qodobkan waxaana dib loogu magacaabi doonaa kormeerayaasha ka tagay Guddiga Kormeerka sababo kala duwan.
QODOBKA 22 - (1) Si looga qaybgalo imtixaanka gelitaanka;
a) inuu qaado shahaadooyinka ku xusan cutubka (A) ee cutubka koowaad ee qodobka 14 ee Sharciga Shaqaalaha Dawladda ee tiriyay 7 / 1965 / 657 iyo 48,
b) Ma ahan in da'da 35 laga bilaabo maalinta koowaad ee Janaayo ee imtixaanka,
c) In laga dhigo mid ka qalinjabiya jaangooyooyinka sharciga, dhaqaalaha, sayniska siyaasadeed, maamulka ganacsiga, dhaqaalaha iyo sayniska maamulka oo bixiya ugu yaraan afar sano oo ah waxbarashada aasaasiga ah,
j) Marka laga helo dhibcaha ugu hooseeya ee nooca dhibcaha KPSS ama noocyada uu go'aamiyey Madaxweynenimada,
d) Inuu ka mid noqdo codsadayaasha codsadayaasha leh dhibcaha ugu sareeya, laga soo bilaabo tirada musharixiinta ay go'aamisay Madaxweynenimada (oo ay ku jiraan musharaxiinta kale ee leh isla natiijada musharraxa ugu dambeeya), oo ka bilaabma midka ugu sarreeya dhibcaha;
e) Marka la eego xaaladda caafimaad, u habboon tahay dhammaan noocyada xaaladaha cimilada iyo safarka iyo in laga hortago naafanimada waajibaadka kormeerka, ma laha cudur ama naafonimo,
f) Gelitaanka imtixaanka mar labaad ama labaad,
Waxaa muhiim ah.
QODOBKA 23 - (1) Taariikhaha imtixaannada gelitaanka, meelaha laga soo galo iyo shuruudaha gelitaanka waa in lagu daabacaa rasmiga rasmiga ah iyo Madaxa Shaqaalaha Dawladda iyo shabakadda shirkadda ee shirkadda. Imtixaanka gelitaanka waxaa la sameeyaa ugu yaraan hal bil ka hor taariikhda imtixaanka.
(2) Xilliga codsiga iyo diiwaangelinta musharixiinta waxaa go'aaminaya Guddomiyaha Guddiga Kormeerka oo ku xusan ogeysiiska baaritaanka.
Warqadaha laga codsado codsadayaasha
ARTICLE 24 - (1) Musharrixiinta raba inay qaataan imtixaanka;
a) Warbixinta lambarka aqoonsiga TC,
b) Foomka dalabka ee imtixaanka,
c) Naqshadda shirkadda ee la ansixiyey ee kombiyuutarka ee dokumentiga natiijada KPSS,
d) Nuqulka asalka ah ee shahaadada ama shahaadada qalin-jabinta ama shirkadda shirkadda ee la ansixiyay,
d) Laba sawir oo la qaaday intii lagu jiray sanad-kii 4,5 ee 6 1 cm,
oo leh TCDD Transportation Inc. Waxay dalbanayaan Guddiga Kormeerayaasha.
(2) Codsadayaasha horay u dhammeeyaa imtixaanka qoraalka ah waxaa looga baahan yahay inay soo gudbiyaan dukumintiyada soo socda ka hor inta aan la gelin imtixaanka afka:
a) Qoraal qoraal ah oo aan jirin wax caqabad ku ah inuu shaqadiisa u guto xaalad caafimaad.
b) Qoraal qoran oo sheegaya in musharraxiinta raggu aysan xiriir la lahayn adeegga milatariga.
c) Qoraal qoraal ah oo aan jirin wax dembi ah.
d) Manhajku waxa uu ku qoran yahay qoraal gacmeed.
d) Afar sawir ayaa la qaaday intii lagu jiray sanad-kii 4,5 ee 6 1 cm.
(3) Natiijooyinka imtixaanka waxaa loo aqoonsan yahay mid aan shaqeynin waxaana loo diraa kuwa lagu helo inay been abuurteen ama dukumiintiyada la soo gudbiyey. Xitaa haddii loo magacaabay, waa la joojiyay oo cabasho dambi ayaa laga xareeyey Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee 26 / 9 / 2004 iyo qodobbada ku xusan Xeerka Ciqaabta ee 5237.
Shahaadada galitaanka imtixaanka
ARTICLE 25 - (1) Baarayaasha waxaa la siiyaa shahaado sawir oo uu soo saaray Guddoomiyaha Guddiga Kormeerayaasha. Imtixaanka waxaa lagu geli karaa adigoo muujinaya dukumeentigan.
ARTICLE 26 - (1) Kormeeraha Kalkaaliyaha Kormeeraha waxaa loo xulanayaa iyada oo ku saleysan arrimaha soo socda iyo sida waafaqsan qodobada xeerka hadda:
1) Sharciga Dastuurka,
2) Mabaadiida Guud ee Sharciga Maamulka, Maamulka Xukunka, Urur Maamuleed,
3) Xeerka Dambiyada (Mabaadi'da Guud),
4) Sharciga madaniga (marka laga reebo sharciga qoyska),
5) Sharciga waajibaadka (mabaadii'da guud),
6) Sharciga ganacsiga (mabaadi'da guud),
2) Macro dhaqaale,
3) Dhaqaalaha ee Turkey,
4) Dhaqaalaha Caalamiga ah,
1) Siyaasadda Maaliyadda,
2) Dakhliga Dadweynaha iyo Kharashyada,
4) Nidaamka Canshuuraha Turkiga,
1) Xisaabinta Guud,
2) Xisaabinta shirkadaha,
3) Falanqeynta Diyaarinta Xisaabta iyo Tilmaamaha,
4) Xisaab Ganacsi,
d) Luqadda Dibadda;
mid ka mid ah.
QODOBKA 27 - (1) Guddiga imtixaanka waxaa lagu aasaasay ka qaybqaadashada afar kormeerayaal hoosta guddoomiye madaxweynenimo isagoo ansixinaya Maareynta Guud. Intaas waxaa dheer, Guddoomiyaha wuxuu magacaabayaa tiro ku filan oo ka mid ah xubnaha bedelka ka ah baarayaasha.
Imtixaan qoran iyo qiimeyn
ARTICLE 28 - (1) Imtixaan qoran ayaa lagu qabtaa mabaadiida soo socota:
a) Imtixaan qoran ayaa la bilaabi doonaa goobta iyo saacadda lagu dhawaaqay oo la dhameeyey mudo cayiman. Waqtiga ka dambeeya Guddiga Imtixaanka, ardaydu looma oggola inay qaataan imtixaanka.
b) Musharaxiinta waxaa la geeyaa hoolka iyaga oo hubinaya kaararka soo-gelinta ee loo soo saaray iyo dukumiintiyada aqoonsiga ee saxda ah ee ay soo saaraan mas'uuliyiinta.
c) Kormeerayaasha ay magacaabeen Guddoomiyaha iyo xubnaha guddiga imtixaanka iyo Guddiga Kormeerayaasha ujeedadaas waxaa ku waajib ah inay ilaaliyaan edbinta imtixaanka, ka hortagga koobiyeynta iyo hubinta in imtixaannada la dhammeeyo iyadoo aan dhacdaba.
j) Baqshadaha su'aasha ayaa la furay ka hor ka qaybgalayaasha xaaladdana waxaa lagu go'aamiyaa daqiiqad.
d) Ka dib marka la barbardhigo warqadaha jawaabta imtixaanka, dukumentiga gelitaanka imtixaanka iyo magaca iyo lambarka waraaqda, qeybta qaybta ayaa la ururiyaa iyadoo la xirayo musharaxa oo lagu dhejiyo baqshad. Baqshadda, waxaa lagu qoraa inta waraaqaha lagu darayo imtixaanka, oo lagu xidhay shaabadda Guddoomiyaha Guddiga Imtixaanka, oo ay saxiixeen Guddoomiyaha iyo xubnahooda, iyo xaalada kama dambaysta ah ayaa lagu go'aamiyaa daqiiqad.
e) Dhamaadka imtixaan kasta, waraaqaha imtixaanka ee lagu dhejiyay baqshadda Guddiga Imtixaanka waxaa loo gudbinayaa Guddoomiyaha Guddiga Kormeeraha oo leh daqiiqadaha.
f) Haddii ay lagama maarmaan noqoto, tallaabooyinka waxaa qaadi doona Agaasimaha Guud ee amniga baarista.
(2) Fasalka imtixaanka qoraalka ah; Waa celceliska fasalada laga soo qaatay kooxaha imtixaanka ee aan ahayn luqadaha ajnebiga ah. Si loo tixgeliyo in lagu guuleysto imtixaanka qoraalka ah, ugu yaraan 60 waa in laga helaa mid kasta oo ka mid ah kooxaha imtixaanka qoraalka ah ee aan ahayn luqadda ajnabiga oo celcelis ahaan waa inay ahaadaan ugu yaraan 65.
Baaritaanka afka, maadada baaritaanka iyo qiimeynta
ARTICLE 29 - (1) waa ugu sareeya ee lagu dhawaaqay ee bilaabin imtixaanka galo inuu dhaliyo ilaa afar jeer tirada shaqaalaha ku xusan musharaxiinta ka musharrixiinta ka gudba imtixaanka qoran, qaadashada wararka warqad, meesha, maalintii waxaa lagu magacaabaa baaritaanka afka la tilmaamayo iyo waqti. Wargelinta iyo wacitaanka waxaa sameeya Guddiga Kormeerayaasha.
(2) Imtixaanka afka, murashax kasta waxa lagu qiimeeyaa dhibcaha buuxda ee 100 ee guddoomiyaha iyo xubnaha gudiga imtixaanka. Qiyaasta xisaabta celceliska ee dhibcahan waxay ka dhigan tahay heerka imtixaanka afka.
(3) Baaritaanka afka, murashixiinta;
a) Heerka aqoonta maadooyinka imtixaanka,
j) Is-kalsooni, kalsoonida iyo kalsoonida,
iyo si gaar ah loo qiimeeyo.
(4) Musharrixiinta waxaa lagu qiimeeyaa dhibcaha konton darajo ee loogu talagalay subaxnimadii (a) ee sadarka sadexaad ee sadarka sadexaad ee sadarka saddexaad, mid kasta oo ka mid ah sifooyinka ku qoran (b) ilaa (e).
(5) Si loogu guuleysto imtixaanka afka, darajada waa inaysan ka yarayn 65.
Ujeeddooyinka qorista iyo natiijooyinka baaritaanka afka
QODOBKA 30 - (1) Ujeeddooyinka natiijooyinka imtixaanka qoraalka ah iyo tan afka ayaa loo gudbiyaa Madaxa 5 maalmaha shaqada kadib markii lagu dhawaaqay natiijooyinka imtixaanka. Rafcaannada waxaa baaraya Guddiga Imtixaanka ugu dambeyn 5 maalmaha shaqada. Guddiga imtixaanku wuxuu ku-darsadaa natiijooyinka imtixaanka warbixinta wuxuuna u gudbiyaa Madaxtooyada. Marka loo eego natiijada baaritaanka waxaa sameeya Madaxweynuhu.
Qiimeynta fasalada imtixaanka gelitaanka iyo magacaabida kaaliyaha kormeeraha
ARTICLE 31 - (1) Imtixaanka gelitaanka imtixaanka wuxuu ku salaysan yahay celceliska xisaabinta ee fasalada la qaaday oo ka dhashay imtixaanka qoraalka ah iyo baaritaanka afka. Si loo guuleysto, dhibcaha imtixaanka gelitaanka waa in aysan ka yarayn 65.
(2) Haddii tirada ardayda ku guuleysatay imtixaanka ay ka badan tahay tirada shaqaalaha, kuwa imtixaanka gelitaanka ayaa la door bidayaa. Marka la eego sinnaanta heerka fasalka gelitaanka, murashaxa leh fasalka luuqada shisheeye ayaa mudnaanta leh. Haddii tirada ardayda imtixaanka lagu gudbo ay ka badan tahay tirada bannaan ee bannaan, murashaxa ayaa loo tixgelinayaa inuu yahay musharaxa illaa inta tirada shaqooyinka banaan iyo tirada musharixiinta lagu dhawaaqay sida ay u kala horeeyaan heerka guusha ee musharixiinta kale. Kuwa kale, natiijooyinka imtixaanka looma tixgeliyo inay yihiin kuwo la soo saaray.
(3) Natiijooyinka imtixaanka waxaa go'aamiya Guddiga imtixaanka. Kuwa gudbaya baaritaanka waxaa looga baahan yahay Guddiga Kormeerayaasha. Musharixiinta waxaa looga baahan yahay inay codsadaan Guddiga Guddiga Kormeerka illaa taariikhda lagu sheegay ogeysiiska si ay u fuliyaan hawlahooda la xiriira ballanta.
(4) Qeyb ka mid ah imtixaanka gelitaanka ee kaaliyaha kormeere ayaa la sameeyaa si ay u kala saaraan darajada imtixaanka. Natiijooyinka imtixaannada kuwa aan wali wali xafiiska qabanin muddada sharciga, inkastoo imtixaanka gelitaanka dhab ahaantii lagu guulaystay oo la magacaabay, looma tixgelin doono dulsaar ku filan. Waxaa loo qoondeeyay inay noqdaan kuwa guuleysta sida ay u guuleysteen.
QODOBKA 32 - (1) Tababaridda kaaliyeyaasha kormeerayaasha;
a) Si loo horumariyo shakhsiyadooda marka la eego shuruudaha looga baahan yahay xirfadlaha,
b) Si loo hubiyo in ay helaan waayo-aragnimo iyo khibrad ay ku leeyihiin sharciyada ku jira gudashada, kormeerka, baaritaanka iyo baaritaanka,
c) Inay ka faa'iidaystaan ​​caado ka-faa'iideysiga soo-saarka asaasiga ah ee keenay shaqada sayniska iyo farsamada,
j) In la siiyo fursado horumarinta aqoonta luuqadaha shisheeye,
d) Inay noqdaan kuwo hogaaminaya oo dhiirigalinaya si ay ugu suurtogasho inay si firfircoon uga qayb qaataan hawlaha bulshada, dhaqanka iyo xirfadaha ku saleysan xirfadaha,
mabaadiida ayaa la socda.
QODOBKA 33 - (1) Kaaliyaha Kormeeraha waa in lagu tababaraa muddada sadexda sano ah ee hay'adaha samafalka ah sida ku cad barnaamijka soo socda.
(2) Daraasada mudada koowaad:
a) Eraygan waxbarashada 21 / 2 / 1983 taariikhaysan 83 / 6061 Wasiirada No. xafiisyada on Regulations guud waa in ay ahaataa murashaxiinta ra'iisul in Saraakiisha Tababarka Musharaxa ansixyo Golaha, iyo bilaabmaa waxbarashada diyaarinta.
b) Sidoo kale in muddo this, Guddiga hawlahooda u kormeeraa awoodaheeda ka mid ah Madaxtooyada, dib u eegista iyo xeerarka hadda la xiriira baaritaanka, horumarinta xirfadaha luqadaha ajnabiga ah ee ku barayay kormeeraha kaaliye hawlgallada Company iyo hawlaha iyo kaaliyaha kormeerayaasha waxaa lagu qabtay tababarka akhriska. Inta lagu jiro tababbarradan, baaritaanka waxaa la sameeyaa. imtixaanada Kuwan waxaa laga soo qaaday dhibco buuxa celcelis 100 ee fasalada ah iyadoo ay sabab u ah qoraallada waxbarasho semester horeysay tiriyo. Shaqada mudada koowaad waa bisha 6.
(3) Daraasadaha mudada dheer ah;
a) Waa in loo habeeyaa si loo kormeerayaasha u ogaado hannaanka iyo mabaadi'da kormeerka, baaritaanka iyo baaritaanka iyada oo loo marayo ilaalinta kormeerayaasha.
b) Kaaliyaha kormeerayaasha waxay hoos yimaadaan kormeerka iyo kormeerka kormeeraha ay la socdaan. Waxay fuliyaan waajibaadka la siiyay iyaga oo raacaya tilmaamaha kormeeraha. Ma sameyn karaan baaritaan, kormeer iyo baaritaano kali ah, mana ay sameyn karaan warbixinno.
c) Shaqaalaha kormeerayaasha waa in loo habeeyaa si loogu suurtogeliyo inay koraan sida ugu wanaagsan ee ay ufilan karaan kormeerayaasha ay la socdaan.
j) Kormeeraha kormeerayaasha waxaa lagu siiyaa waraaqo ku saabsan dhibcaha buuxda ee 100 by kormeerayaasha ay la socdaan. Celceliska shahaadooyinkan waxaa loo tixgeliyaa simistarka labaad.
d) Marxaladda labaad waa 1 sanadka.
(4) Daraasadaha wareega sadexaad;
a) Muddada koowaad iyo labaad oo ka mid ah doodaha bishii 18 on shaqada ee shaqada kormeerayaasha 'garab kaaliyaha kormeeraha kuwaas oo si guul ah ku dhameystirtay dhamaadka Guddiga Kormeerka hore officio kormeerka, baaritaanno iyo weydiimaha la siin karaa. Hawsha ah Baadhayaashu kormeerayaasha caawiyaan haddii idman iyaga oo u dhaqmaan sida ay mas'uuliyad gaar ah.
b) Kaaliyaha kormeerayaasha loo oggolaaday kormeerka, baaritaanka iyo baaritaanka waa in uu la shaqeeyaa kormeerayaasha kale ama kaaliyaha kormeerayaasha haddii loo baahdo.
c) Shaqaalaha kormeerayaasha muddada seddexaad waa inay qabanqaabiyaan Guddoomiyaha Guddiga Baadhista iyada oo tixgelinaysa dhammaystirka barbaarintooda.
j) Wakhtiga sadexaad ee qoraalka ee barashada kormeerayaasha; Dhammaan noocyada daraasaadka, kormeerka, baadhitaanada iyo baadhitaannada la xiriira baaritaanka, baadhitaanada iyo baaritaannada waxaa lagu go'aamiyaa baaritaanka iyo qiimeynta warbixinnada Guddiga Imtixaanka U-qalmitaanka kahor imtixaanka aqoonta.
(5) Xanuun iyo sababo kale oo khasab ah, 3 ayaa la kordhin doonaa illaa inta muddooyinka gargaar ee kuwa aan caawimaad ka helin shaqadooda.
Ka eryidda Guddiga Kormeerka
ARTICLE 34 - (1) inta lagu jiro kormeere ku xigeenka, kormeeraha aan waafaqsanayn qof iyo xirfadaha, dabeecadaha iyo dabeecadaha waa uun kuwa adag, sugayaan baaritaan lagu saleeyo waxaa lagu wareejiyay shaqo kale oo ka baxsan Guddiga Audit.
QODOBKA 35 - (1) Kalkaaliyeyaashu waxay ku xiran yihiin baaritaanka u qalmidda ka dib muddo saddex sano ah.
(2) Xeerka hadda iyo isticmaalka sharcigaan ee qaybta waajibaadka iyo awooda ee professor iyo kaaliyaha kormeerayaasha; macluumaadka ku saabsan baaritaanka, baaritaanka iyo baaritaanka; haddii ay helaan aqoon iyo xirfado kale oo looga baahan yahay xirfadlaha ayaa la cabbirayaa.
(3) Imtixaanka kalsoonida wuxuu ka kooban yahay laba marxaladood: qoraal iyo afka. Imtixaanka qoraalka, 38 waxaa laga sameeyaa maadooyinka imtixaanka ee ku xusan qodobka. Kaaliyaha kormeeraha ee ku guuleysta imtixaanka qoraalka ah wuxuu ku xiran yahay imtixaan afka ah. Dhibcaha imtixaanka aqoonta waxaa lagu xisaabiyaa oo lagu qiimeeyaa iyadoo la raacayo mabaadii'da lagu sheegay 40.
ARTICLE 36 - (1) badalay imtixaanka qoray si lagaaga caawiyo kormeerayaasha inay qaataan imtixaanada shahaadada, maalin iyo waqti, laba bilood ka hor imtixaanka qoraalka ah, halka goolkii guusha ee imtixaanka qoraalka ah, meesha uu afka baaritaanka, taariikhda iyo waqtiga, maalmood 15 ugu hor imtixaanka, Guddiga Kormeerka post a ku dhawaaqay.
Guddiga imtixaanka aqoonta
QODOBKA 37 - (1) Imtixaanka aqoonta waxaa fuliya Guddiga Imtixaanka U-Qalida, kaas oo lagu sameyn doono si waafaqsan shuruudaha ku xusan qodobka 27.
Barnaamijka imtixaanka aqoonta
ARTICLE 38 - (1) caawimaad Isbatooraha ah muddo saddex sano ah ka heshay aqoon xirfadeed iyo waayo-aragnimo, heerka uu gaarsiisan kuwaas oo kaa caawin in ay fahmaan imtixaanka isreebreebka ee xeerarka iyo dhaqanka ee ciidamada ku tilmaamay mabaadii'da hoos ku qoran, kormeer iyo xisaabaadka, baaritaan iyo weydiimaha nidaamka baaritaanka by xulay sameeyey.
a) Sharci iyo codsi:
1) Sharci dejinta shirkadaha dhaqaalaha ee dawladda.
2) Qawaaniinta Agaasinka Guud iyo xeerarka, dardaaranka iyo wareegyada Agaasimaha Guud.
3) Sharciga la xariira shaqaalaha.
4) Sharciga ganacsiga (mabaadi'da guud).
5) Sharciga waajibaadka (mabaadi'da guud).
6) Sharci Dejinta Dadweynaha.
7) Xeerka Lacagta Safarka 6245.
8) Sharciga maamulka.
1) Xisaabinta Guud.
2) Sharciga la xiriira xisaabaadka.
c) Baaritaanka, baaritaanka iyo baaritaanka:
1) Qodobka Xeerka Ciqaabta ee 5237 ee ku saabsan dembiyada shaqaalaha rayidka ah.
2) Xeerka Ka-hortagga Xatooyada ee 5607.
3) 3628 Wargelinta Maalka, Lidka La-Kacaanka iyo Sharciga La-Dagaalanka Musuqmaasuqa.
ARTICLE 39 - (1) dileen note, muddada ugu horeysay, muddo labaad, iyo Guddoomiyaha Guddiga Kormeerka muddada saddexaad, qoraalada waxbarasho, aqoonta kaaliyaha kormeerayaasha, dabeecadaha iyo dabeecadaha, hawlaha iyo dareen mas'uuliyadeed, aqoon xirfadeed, ku saabsan dadaala iyo 100 mudnaan xirfad waa celceliska qoraalada ku noqon doonaa dhibco buuxa. Kobaca waa in aanay noqon wax ka yar dhibcood 65 ah.
Qiimeynta imtixaannada shahaadada
ARTICLE 40 - (1) Darajo imtixaan aqooneed; iyo celceliska qoraalka iyo imtixaanka afka.
(2) Imtixaanka qoraalka ah waxaa qiimeynaya xubnaha Guddiga Imtixaanka Farsamada ee dhibcaha buuxa ee 100. Si loogu guuleysto imtixaanka qoraalka, imtixaanka qoraalka ah waa in uu ahaado ugu yaraan 65.
(3) Dhammaan xubnayaasha Guddiga Imtixaanka U-Qalmayntu waxay keenayaan dhibcaha buuxda ee 100 ee kaaliyeyaashii xisaabiyeyaasha ee baaritaanka afka. Celceliska darajooyinka la bixiyay waa darajada imtixaanka afka. Si loogu guuleysto imtixaanka afka, fasalkan waa inuu ahaado ugu yaraan 65.
(4) Heerka, shahaadada qoraalka ama qoraalka ee 65 waxaa loo tixgeliyaa inay ku guuldareysato imtixaanka aqoonta iyo qaybta labaad ee 42.
Soo bandhigida natiijooyinka imtixaanka iyo diidmada
QODOBKA 41 - (1) 10 (XNUMX) Natiijooyinka imtixaanka waxaa lagu dhawaaqi doonaa ugu dambeyntii Guddiga Kormeerka ee XNUMX maalmaha shaqada ka dib dhamaadka imtixaannada.
(2) Diidmada natiijooyinka imtixaanka qoraalka ah iyo tan afka waxaa loo gudbin doonaa gudoomiyaha Guddiga Kormeeraha codsi ku jira maalmaha shaqada 5 ka dib marka lagu dhawaaqo natiijooyinka imtixaanka qoraalka iyo afka. Diidmooyinkan waxaa baaraya Guddiga Imtixaanka U-qalmitaanka ee 5 maalmaha shaqadda ugu dambeyntii natiijada waxaa lagu ogeysiiyey qofka la xidhiidha qoraal ahaan.
QODOBKA 42 - (1) Kuwa ku guulaystay imtixaannada aqoonta waxaa loo xilsaaray Kormeeraha si uu u guuleysto.
(2) Kuwa ku guuldareysta in ay dhaafaan imtixaanka ama kuwa aan imtixaanka qaadanin iyada oo aan cudurdaar loo dhigin waxaa loo xilsaaray meelo kale oo ka tirsan Xafiiska Madaxa-bannaan.
Kormeerka iyo kormeerka kormeerayaasha
QODOBKA 43 - (1) Sida waafaqsan qodobbada guud, soo-jeedinta soo socota ee kormeerayaasha kaaliyeyaashu ku guuleysteen kormeerka si guul leh adoo gudbinaya imtixaanka shahaadada iyo magacaabidda kormeeraha.
(2) Muddada aasaasiga ah ee kormeerida kormeerka; Waa mudada dhammaan sharciyada, lacag la'aanta ah iyo bilaash ah ee waajibaadka maamulka, iyada oo la tixraacayo tilmaamaha kormeeraha iyo shaqaalaha lagu hayo kaaliyaha kormeeraha, kormeerka.
(3) Loogu talagalay kormeerayaasha ugu sarreeya ee isla muddada kormeerka kormeerka ayaa lagu go'aamiyey sida ay ugu kala badan yihiin heerka guusha imtixaanka aqoonta ee kormeerayaasha imtixaanka gelitaanka.
(4) Kuwa loo magacaabay xirfad aan imtixaanka tartanka iyo / ama aan lahayn aqoonta; kala badh ka mid ah waqtiyada adeegga ee aan ka ahayn adeegyada kormeerka, iyo dhammaan muddooyinka lagu qaato xirfadda hantidhawrka waa in laga tiriyaa shahaadada mihnadeed ee xisaabinta.
Sare u qaadista iyo sare u qaadista Kormeeraha Sare
ARTICLE 44 - (1) ku ool ah in Isbatooraha u kaca; xirfadle awooda, waayo-aragnimo, dadaal, guulaha iyo Guddiga Kormeerka, oo ay ku jiraan muddada aragti guud xigeenka isbatooraha waxaa wanaagsan in la sii daayo ka hor inta sano uu yahay in la sameeyo ugu yaraan kormeere 10 in Guddiga Kormeerka. Si aad u noqoto musharax u taagan isbatooraha sare; kormeerayaasha 1 waa in ay leedahay shuruudaha lagu magacaabayo shaqaalaha degree th.
(2) Joogitaanka sare ee Kormeerayaasha Sare waa had iyo jeer ka hor kormeerayaasha. Marka la go'aaminayo amarka sare ee u dhaxeeya Kormeereyaasha Madaxa; Taariikhda ballan loo gelinayo Kormeeraha Guud, Sare ee kormeerka loogu talagalay kuwa lagu magacaabay isla taariikhdaas iyo heerka guusha ee imtixaanka aqoonta ee isku midka ah ee kormeerka kormeerka waa in lagu saleynaa.
(3) Kuwa ku soo noqda Kormeeraha ka dib markii Guddoomiyaha Guddiga Kormeeraha waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay kan ugu sareeya. Haddii ay jiraan wax ka badan hal kormeerayaal isla muddadan, waayeelka kormeereyaashu waa in ay saldhig u noqdaan go'aaminta heerkooda.
Dib u celinta kormeerayaasha ka tagay Guddiga Kormeerka
QODOBKA 45 - (1) Dib u soo noqoshada kormeerayaasha loo xilsaaray xafiis kale oo gudaha gudaheeda ama dibaddiisa ka mid ah ama ka tagay istiqaaladaa waxay ku xiran tahay Agaasimaha Guud.
(2) Xoogaaga kuwa ka tagay xafiiska ka dib markii ay noqdaan kormeeraha waa 43 iyo 44 ayaa lagu go'aamiyey alaabta.
Mabaadi'da Shaqada Kormeerayaasha
Fahamka iyo ujeeddada kormeerayaasha
ARTICLE 46 - (1) kormeerayaasha, kormeerka jidka firfircoon si ay u aqoonsadaan arrimaha looga hortago fulinta dhacdooyinka dhaqaale, bulsho, sababo sharci maamul oo la falanqeeyo, kor horumar ah ee nidaamka ee goobaha shaqada iyo shaqaalaha ku jiray hawlgal hufan oo xajiya maanka ujeedada tahay in tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo hagaajiyo nidaamka kormeerka . Si taas loo gaaro, waxay aqoonsaday inta ay shaqada ku dadaala, guul, dadaal iyo ka gaabin adeegyada dawladda, gobolka, iyadoo la isticmaalayo awoodaha jihada danta guud, miyir iyo ka dhigi laga yaabaa in soo jeedinta shaqaalaha aan la abaal marin. Dib u eeg, inta lagu guda jiro kormeerka iyo baaritaanka, ma carqaladeeyo doonaa niyadda shaqaalaha iyo in la yareeyo wax ku oolnimada shaqada ay u muujiyaan daryeelka ay u guuraan.
(2) Waajib kasta oo ka mid ah shirkadda lagama yaabo in laga reebo goobta baaritaanka ee Guddiga Kormeerka oo leh sharciyo, wareegto ama sharciyo la mid ah.
(3) Waxay sidoo kale muhiim u yihiin buuxinta shaqada aan la fulinin ama ka tegin, iyo in la ciqaabo kuwa hogaaminaya.
Diyaarinta barnaamijka kormeerka sanadka
QODOBKA 47 - (1) Si loo kormeero si wax ku ool ah oo wax ku ool ah, codsiyada kormeerida qaybaha gobollada iyo gobollada bisha Janaayo sannad kasta waxaa laga codsanayaa Waaxyada qoraal ahaan. Sida ku xusan talooyinka iyo codsiyada laga helo Madaxa Waaxda, Barnaamijka Kormeerka Sanadlaha ah ayaa la diyaariyaa oo loo gudbiyaa ansixinta Maamulaha Guud iyada oo la tixgelinayo barnaamijyada kormeerka hore iyo shaqaalaha Guddiga Kormeerka.
(2) Habraaca iyo mabaadii'da ku saabsan diyaarinta Barnaamijka Kormeerka Sanadlaha ah waxaa go'aamiya Guddiga Kormeerka si waafaqsan Mabaadi'da Shaqada iyo Hannaanka Guddiga Kormeerayaasha.
Hirgelinta barnaamijka kormeerka
ARTICLE 48 - (1) Guddiga Kormeerka diyaariyey gudahood baaxadda baadhitaankii ugu danbeeyay ee sannadlaha ah iyo ansixinta Maareeyaha Guud ee Barnaamijka Inspection waxaa fuliyey sida ay mabaadi'da barnaamijka. Barnaamijka waxaa la sameeyay iyadoo la raacayo shaqooyinka kale ee dibadda ah oo Maareeyaha Guud uma baahna waqti ansixinta hawlaha kale ee kormeerka iyo tours ee kormeerayaasha Guddiga Kormeerka go'aamiyeen Guddiga Baadhayaashu Mabaadi'da Working iyo Hanaanka ay.
Tababarka kormeerayaasha oo u diraya wadamada shisheeye
QODOBKA 49 - (1) Kormeerayaashu waxay shaqeeyaan oo horumariyaan dedaaladooda waxayna dadaal u yihiin dadaal. Madaxweynuhu wuxuu u oggol yahay horumarinta kormeerayaasha waxayna ku dhiirri-galisaa dadaalkooda horumarineed.
a) Horumarinta aqoonta iyo aqoonta guud:
1) Waxay u ogolaataa kormeerayaasha in ay ka qayb qaataan koorsooyinka, shirarka iyo siminaarka kuwaas oo ka faa'iideysanaya horumarinta aqoontooda xirfadeed iyo guud, ama cilmibaaris waxbarasho haddii loo baahdo.
2) Kulamo ayaa la qabtaa si loo go'aamiyo fikradaha is-dhaafka ah ee Guddiga Kormeerayaasha fikradaha muhiimka ah oo faa'iido leh iyo natiijooyinka ku saabsan shirkadda iyo xirfad-baadhista.
3) Tababar, cashar, kooras, kharashka shirarka iyo kharashyada shirarka ayaa daboolaya Shirkadda.
b) U dirida wadamo shisheeye:
1) Baarayaasha baaro arrimaha la go'aamiyo by Agaasimaha Guud ee, aad sameyso cilmi iyo aqoon xirfadeed, dhaqan iyo 21 si ay u arkaan waxbarashada si ay u horumariyaan waayo-aragnimo / 1 / 1974 taariikhaysan 7 / Wasiirada 7756 taariikhaysan in koray ansixyo Council si Abroad u soo dirto Regulations on Shaqaalaha Rayidka aan ka badnayn hal sano gudahood qaabka dibada ansixinta wasiirka diray.
2) Si loo go'aamiyo kormeerayaasha in loo diro wadamada dibadda, amarro jaangooyo, daraasad iyo aqoonta luuqadaha shisheeye ayaa la arkay.
3) kormeerayaasha The diray dalalka shisheeye, gaar ahaan arrimaha ka leexinayn ee af iyo qoraal sameeyo shaqo, horumarinta luqadda shisheeye iyo abaabulo wararka iyadoo la raacayo amarada la siiyo by Madaxtooyada ku saabsan jihada iyo barnaamijka shaqada.
Meelayn ku meel-gaar ah ee boosaska maamulka
ARTICLE 50 - (1) kormeerayaasha, kormeere oo aan waxba loo dhimayn xuquuqda, u magacaabay si ku meel gaar ah ee jagooyinka maamulka ogolaanshaha ee Agaasimaha Guud iyo Isbatooraha noqon lahaa. Si kastaba ha ahaatee, casaan ku meel gaar ah ama joogto ah Guddiga Kormeerka mar posted kormeere ee hawlaha maamulka oo laga fuliyay shaqo-guriga kormeerka sanadka 3 aan la dhaqaajin karin inta lagu jiro.
Warbixinnada iyo Shaqaalaha Xidhiidhka iyo waajibaadka iyo waajibaadka maamulayaasha
Noo sheeg noocyada
QODOBKA 51 - (1) Kormeerayaasha, natiijooyinka shaqada sida waafaqsan nooca shaqada;
a) Warbixinta Kormeerka Responsible Response,
b) Dib u eegida Warbixinta,
c) Warbixinta Xaaladda Guud,
j) Warbixinta Warbixinta,
iyo inay ogaadaan.
ARTICLE 52 - units (1) Xarunta fuliyeen hawlaha iyo waxqabadyada qodobada sharciyeed gudaha iyo dibadda, Agaasinka Guud ee mabaadi'da hawlgalka, hababka maaraynta iyo si waafaqsan mabaadi'da iyo anshaxa maxkamad hab labis in unugyada ee shirkadda oo dhan, ay ka saareen macaamil khalad iyo falalka dhaawac shirkadda, ka dib markii joojinta ka mid ah la saxo iyo ogaanshaha of qiyaastaas oo si ay u tirtiraan adeegga iyo hannaanka sanad walba kormeera kormeeraha.
QODOBKA 53 - (1) Sida waafaqsan mabaadi'da ilaalinta, dayactirka iyo hagaajinta nidaamka shaqada ee Shirkadda;
a) Company ee unugyada, geeddi socodka iyo hawlaha qodobada sharciyeed gudaha iyo dibadda, Agaasinka Guud ee mabaadi'da hawlgalka, dhaqaalaha, maamulka ganacsiga iyo injineernimada aasaaska, hufnaan iyo waafaqsanaanta mabda'a faa'iidada iyo hubinta sameeyay hab labis by Company ee cutubyada oo dhan,
b) In qorshayaasha iyo weecsanaanta dhaqanka ka ujeedooyin miisaaniyadda leheyn adeega sharciga, haddii dhinacyada dhutiya oo aan ku filnayn, dibadda u saaray oo ay la socdaan sababaha iyo cawaaqibta, iftiinka ku daatay Agaasinka Guud iyo dhakhaatiirta, jeedinayso cilmi baaris ku kaabidda miciinka,
c) Bixinta cilladaha iyo cilladaha keeni kara waxyeelada Shirkadda, iyo go'aaminta tallaabooyinka looga hortagayo khalkhalka iyo khaladaadka,
la sameeyey ujeedo.
Warbixinta kormeerka masuulka ah
ARTICLE 54 - dhiman (1) ee kormeerka iyo helay khaldan iyo in camalkooda u baahan in la saxo by unugyada walaacsan, kormeerayaasha ee kuwan jawaabaha la jawaabaha mid ah kuwa la baarista doodaha la soo dhaafay iyo unugyada ku saabsan arrimaha ay ka mid yihiin xaaladda guud ee u jawaabay warbixinta kormeerka waxaa lagu soo saaray.
(2) Inkasta oo ay tahay lagama maarmaan in la soo saaro warbixinta kormeerka ee hal cutub kasta, haddii loo baahdo waa suurtogal in la soo saaro warbixinta kormeerka jawaabaha kala duwan ee adeegyada ama hawlaha.
(3) Warbixinta kormeerka;
a) Magacyada, magaca qoyska iyo shaqaalaha rayidka ah ee hawlgalkooda la kormeerayo, taariikhda ay ka baaraandegayaan laga bilaabo taariikhda la baaray,
b) Qodobbada sharcigu waa kuwo aan sax ahayn oo aan dhammaystirnayn;
c) Warbixinta waxaa lagu soo jawaabi doonaa dadka ku haboon ee ku jira maalmaha 15 ugu dambeyntii,
j) Hantida macaamilka ee looga baahan yahay sharcigu,
(4) Warbixinnada jawaabta ayaa lagu celiyaa kormeeraha ka dib markii 15 ay ka jawaabtay kormeeraha qaybta la kormeeray muddada maalin kasta. Warbixinta soo socota waxaa loo gudbiyaa Guddiga Kormeeraha ee Kormeeraha isagoo raacinaya fikrad kama dambeys ah.
(5) Haddii jawaabaha la siiyo jawaabeyaasha ay u arkeen in aysan ku habooneyn kormeeraha, fiiro gaar ah waa in la siiyaa fikradda ugu dambeysa.
(6) Ra'yiga kama dambeysta ah ee warbixinnada aan ka soo jawaabin kormeeraha sababo macquul ah sida jirro, adeegga milatari, tababarka dibada waxaa laga yaabaa inuu qoro kormeere uu magacaabay Madaxweynaha.
(7) Kormeerayaashu waxay u hoggaansamaan jawaab-celiyeyaasha waqti go'an oo ay ka helaan jawaab-celiyeyaasha. Kormeereyaashu waa inay wargaliyaan Guddiga Kormeerayaasha Guddiga ee ku saabsan warbixinnada aan laga jawaabin muddadaas iyada oo aan la hirgelin sababo macquul ah.
(8) Guddiga Kormeerayaashu waxay soo gudbiyaan warbixinta ugu dambeysa ee baaritaanka iyadoo ansixinaysa Maamulaha Guud oo u diraya xarumaha xarunta dhexe ee agaasimaha guud ayna si dhow ula socdaan natiijooyinka.
(9) Xaaladaha aan ogeysiiska warbixinta la ogeysiinin aan la arkin, kiiska ayaa loo wargalinayaa cutubka lagu baaro warqad iyo nuqul ka mid ah warqadan waxaa loo gudbinayaa Guddiga Kormeeraha Guddiga.
ARTICLE 55 - unit (1) Company of Company ee meelaha kale ee hawsha la lifaaqan, iyo inta lagu jiro dhaqanka hawlaha ama ka dib editor ah maado dhammaystirka qaarkood oo waa shuqulkii sameeyey by kormeerayaasha si ay u soo jeedinta sameeyey horumar.
Warbixinta dib u eegista
QODOBKA 56 - (1) Warbixinta Dib u eegista;
a) Fikradaha iyo soo jeedinta ku saabsan cilladaha ku lugta leh hirgelinta sharciyada khuseeya iyo hababka iyo hababka dib loo dhisi karo,
b) Arrimaha aan loo tixgelinin inay muhiim tahay in lala xiriiriyo warbixinnada kormeerka ee kormeerka,
c) Tixgelinno ku saabsan arrimaha kala duwan ee ay baarayaan Agaasimaha Guud,
j) Haddii aysan jirin xaalad u baahan in dacwad ciqaabeed ah ay ka timaaddo baaritaanka iyo baaritaannada ku saabsan cabashooyinka iyo ogeysiisyada,
in la ogeysiiyo.
(2) Warbixinnada kormeerka waxaa lagu diyaariyay lambar ku filan iyada oo la tixgelinayo qaybaha danaha. Warbixinnadan waxaa loo dirayaa waaxyaha ku habboon Madaxa Guddiga Kormeeraha marka la ansixiyo Agaasimaha Guud.
Warbixinta xaaladda guud
QODOBKA 57 - (1) Warbixinta xaaladda guud ayaa la soo saaray iyadoo ujeedadu tahay in la siiyo macluumaad gaar ah Guddiga Kormeerayaasha ee ku saabsan natiijooyinka baaritaanka.
a) goobta baadhitaanka, unugta la kormeero iyo warbixinno qoran,
b) Qodobbada ogeysiiska iyo cabashooyinka, natiijooyinka imtixaanka iyo natiijada baaritaanka,
c) Maadooyinka waxbarashada, natiijooyinka baaritaanka,
j) Tirada iyo sababaha loo fasaxay saraakiisha iyo shaqaalaha kale,
d) Khaladaadka Guud iyo ka-reebista ee hirgalinta sharciga,
e) Hufnaanta iyo faa'idada qaybta la kormeeray,
f) Macluumaadka ku saabsan marxaladaha kormeerka barnaamijyada sanadka kormeerka ama sanadihii hore iyo arrimaha kale ee loo arko lagama maarmaanka u ah iyada oo la raacayo fikradaha ku saabsan arrintan,
Waa qoran tahay.
(3) Warbixinnada guud ee guud waxay diyaariyaan lambar ku filan waxaana loo diraa Guddiga Kormeerayaasha.
ARTICLE 58 - (1) kormeerka iyo baaritaanka la ogaado inta lagu jiro ama denunciation iyo maadooyinka news helay iyada oo loo marayo cabashooyinka, baaraan Authority haddii loo arko kaluumaysiga iyo lagama maarmaanka ah iyo falalka qodobada dejinta gudaha iyo dibadda ee kiiska ka soo horjeeda, cunaqabateynta in lagu dabaqo müsebbip, tallaabooyin ciqaab waa la qaadi doonaa, sharciga ah, anshax iyo qiimeynta dhinacyada maamulka .
ARTICLE 59 - (1) xarunta Agaasinka Guud iyo shaqaalaha cutubyo gobolka, sida uu dambiga hadda dambi sharciga ama natiijada baaritaanka lagu sameeyo sababta oo ah tallaabo anshaxeed iyo geeddi-socodka si waafaqsan xeerarka shaqaalaha ku xiran warbixinta baaritaanka ah.
(2) kormeerayaasha, warbixinta baaritaanka, taariikhda iyo tirada baaritaano xujo, arrimaha baaritaan oo lagu mudi doono kaas oo qodobada sharciga ah ee dembiilayaasha waxyaabaha dambiyada iyo falimihiisii ​​dambiilayaasha ama haleysan yahay, kaas oo la sheegay in la abuuro waxa uu falka dembi edbin ah.
(3) Kormeereyaashu waa inay diyaariyaan warbixinta baaritaanka waxayna u gudbiyaan Madaxa Guddiga Kormeerka kaddib marka baaritaanka la dhammeeyo.
(4) ku furmi karaan oo ka mid ah nuqulada asalka ah ee warbixinta baaritaanka loo diro goobaha ku haboon saxar iyo soo bandhigay Guddiga Kormeerka ee. Si kastaba ha ahaatee, Law No. 3628 17 Qodobka baaritaanka dembi ka leexinayn ee warbixinta asalka ah si toos ah oo la siiyo xeer-ilaaliyaha guud ay kormeereyaashu, iyada oo aan dib u dhac soo gudbiyey Guddiga Kormeerka ee nuqul.
Warbixinnada waxaa sameeya Guddiga Kormeerayaasha iyo cutubyada dhexe ee warbixinnada
QODOBKA 60 - (1) Warbixinnada; Waxaa baaraya Guddoomiyaha, kormeeraha la-taliyaha ama kormeeraha loo magacaabay. Haddii ay jiraan arrimo u baahan in la saxo ama la dhameeyo, waa in laga saaro kormeeraha qoraal ahaan. Haddii kormeeruhu uusan ka qaybgalin codsiga, ansixinta kormeeraha, oo ay weheliso ra'yiga Guddoomiyaha Guddiga Kormeerka, ayaa la diyaariyaa oo loo gudbiyaa Agaasimaha Guud. Iyadoo la raacayo aragtida ay ansixisay Maareeyaha Guud, macaamilka ayaa la sameeyey.
(2) Haddii ay dhacdo in warbixinta ay soo saarto in ka badan hal kormeere iyo haddii ay jiraan kala duwanaansho feker ah oo ku saabsan natiijooyinka warbixinta ee ka dhexeeyayaasha, kala duwanaanshahan ayaa lagu sheegay warbixinta. Warbixinta waxaa dib u eegaya Guddiga Kormeerayaasha. Oggolaanshaha ra'yiga Guddoomiyaha Guddiga Kormeerayaasha iyo fikradaha kala duwan ee kormeerayaasha ayaa la diyaariyey oo loo gudbiyay Agaasimaha Guud. Iyadoo la raacayo aragtida ay ansixisay Maareeyaha Guud, macaamilka ayaa la sameeyey.
(3) Ka dib qaababka kor ku xusan, oo ay weheliso ansaxinta Agaasimaha Guud, warbixinnada iyo lifaaqyada waxaa loo dirayaa waaxyaha dhexe ama mas'uuliyadaha ee Madaxtooyadda si loo fuliyo.
(4) Warbixinnada kormeerka waxaa baaraya qaybaha dhexe ee muhiimka ah ugu dambeyn 15 maalmaha iyo arrimaha ku xusan warbixinnada waxaa loo dirayaa qaybta la kormeero. Cutubyada la baadhay waa inay fuliyaan arrimaha ku xusan fariinta ku saabsan qaybaha kormeerka ee cutubyada dhexe sida ugu dhakhsaha badan. Qeybaha dhexe ee muhiimka ah waa inay ku wargeliyaan Guddiga Kormeerayaasha 15 inta lagu gudajiro wareejinta warbixinnada kormeerka.
(5) Macaamilka iyo natiijooyinka baaritaanka iyo warbixinnada kormeerka waa in loo wargaliyaa Guddiga Kormeerayaasha sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah qeybaha dhexe ee muhiimka ah.
(6) Warbixinnada kormeerka iyo dib u eegista warbixinnada geedi socodka looga baahan yahay in la kormeero qaybaha ku habboon ee Guddiga Baaritaanka ayaa iska leh Madaxtooyada.
(7) Waraaqaha ku saabsan macaamilada ee cutubyada ku habboon lagu dabaqi karo warbixinta waxaa loo diraa kormeeraha warbixinta qoraalka Guddiga Kormeerka iyo kan ugu sareeya haddii warbixinta ay ku jirto hal kormeerayaal badan.
Waajibaadka iyo waajibaadka kormeerayaasha
QODOBKA 61 - (1) Shaqaalaha iyo maamulayaasha la xidhiidha;
a) dukaan oo ilaaliyo, laakiin halkii ay ka lacag iyo waxay masuul ka ah nidaaminta warqad iyo qiyamka, nooca, lacagta caddaanka ah, securities iyo hantida maguurtada ah ee nooc kasta iyo waraaqaha iyo buugaagta oo ku saabsan yihiin, qarsoona in kastoo waraaqaha oo dhan, afka ama tusi kormeeraha at codsi ugu horreeyey qoraal ah ama la siiyo, iyo si ay u caawiyaan iyaga u haystaa baaritaanka, baarayaasha wixii macluumaad iyo sharraxaad lagu weydiin doonaa hadal ama qoraal oo aan dib u dhac ku siin,
b) Inay bixiyaan kormeerayaasha dhammaan noocyada kaalmada arrimaha ku saabsan shaqadooda, iyo inay bixiyaan shaqaale kaalmeeya oo lagu weydiisto tirinta, rikoodhka iyo diiwaangelinta,
c) maamulaha idman meeshii fulinta adeegga Gudaha Audit, qolka show ama meel ku haboon shaqeyn karaan kormeerayaasha, bixinta qalabka iyo alaabta loo baahan yahay, si ay u gutaan codsiyada kale ee la xiriira hawsha, sahlanaato kasta si ay show iyo si ay u caawiyaan,
j) Inuu ka jawaabo su'aalaha lagu waydiin doono maalmaha 2 ugu dambeyntii kormeerka, baaritaanka iyo baaritaannada,
d) Sii waditaanka kormeerka, baaritaanka iyo baaritaanka, ma aha in ay ka baxaan waajibaadka marka laga reebo macluumaadka kormeeraha ogolaansho iyo sababo kale;
e) Maamulayaasha iyo mas'uuliyiinta ka tirsan waaxda kormeerida, kormeerka iyo baaritaanku waa in ay shaqaalaha u xil saaraan waajibaadkooda sababtoo ah ogolaashadooda ama sababo kale oo aan habooneyn in aan faragelin hawlaha kormeerayaasha,
f) In la bixiyo shahaadooyin kasta oo dukumiinti ah oo ay codsadaan Kormeeraha ama saxiixyada maamulka,
g) In la buuxiyo codsiyada ay soo gudbiyaan kormeerayaasha sida ku xusan qodobka (f) ee 13 ee qodobka saddexaad 1,
h) ee maadooyinka ay xilsaaray in ay kormeerayaasha, nidaamyada macluumaadka, warbixinta qalabka, internet, aabooyinka iyo shabakadaha kale si ay u bixiyaan helitaanka xogta, elektaroonik ah, macluumaad ku saabsan bay'ada magnetic oo la mid ah Kombuyuutarada iyo diiwaanka, afka ama tusi kormeeraha at codsi ugu horreeyey qoraal ah oo ay soo gudbiyaan si loo baadho,
waa waajib saaran waana qasab.
Uruurinta iyo xuquuqda kale
QODOBKA 62 - (1) Kormeereyaashu waxay ka fariisan karaan jeegareynta agaasimaha guud. Buugga jeeg ayaa la siiyaa ujeedadaas. Jeega waxaa lagu celin doonaa Guddiga Kormeerayaasha kadib marka aad si buuxda u isticmaasho. Haddii jeegaga lumo, xaaladda si degdeg ah ayaa loo ogeysiiyaa Guddiga Kormeerayaasha.
(2) Waa lagama maarmaan in lacagtu heshay aysan ka badnayn lacagta la sheegey. Beddelidda khayaanada bisha soo socota waxaa la arki karaa oo keliya maalmaha ugu dambeeya bisha haddii ay dhacdo safar la xiriira shaqada.
Xaanshida kormeerka iyo dukumiintiyada, qalabixinta
QODOBKA 63 - (1) Kormeereyaashu waxay heli doonaan shaabad iyo dukumeenti aqoonsi oo uu saxiixay Agaasimaha Guud.
(2) Kormeerayaasha, kombiyuutarka, mashiinka, scanner, boorsada iyo qalabka kale ee loo baahan yahay iyo qalabka loo baahan yahay ee loo baahan yahay in dib loo cusbooneysiiyo dhammaadka noloshooda faa'iidada leh waxaa bixiya Guddiga Kormeerayaasha.
QODOBKA 64 - (1) Kormeereyaashu waxay u diri karaan warqadaha tooska ah ee hay'adaha dawliga ah iyo ururada iyo dadka dabiiciga ah iyo kan sharciga ah ee arrimaha ku saabsan shaqadooda. Waraaqaha loo gudbiyay Madaxtooyada, waaxyaha xarumaha dhexe iyo kuwa ajnabiga ah ee wasaaradaha iyo dalalka ajnabiga ah waa in la sameeyaa iyada oo la raacayo mabaadi'da guud iyadoo loo marayo Madaxa Guddiga Kormeerka.
(2) Baarayaasha waxay si toos ah ula xiriiraan waaxda gudaha iyo maamulka ee ku saabsan baaritaanka, baaritaanka iyo baaritaanka.
(3) Kormeereyaashu waxay ka warbixiyaan imaanshahooda kuna tagaan Guddiga Kormeerayaasha iyada oo loo marayo telegraf, fakis ama fariin elektaroonik ah.
Mabaadi'da Shaqada iyo Hannaanka Guddiga Kormeerayaasha
QODOBKA 65 - (1) Codsiga Nidaamkan;
a) Kala soocida lakulanka,
b) Si loo go'aamiyo habraaca iyo mabaadiida ku saabsan qaabka, qaybaha, waxyaabaha ku jira warbixinta la soo saaro, maadooyinka kormeerka, baaritaanka iyo baaritaanka,
c) Go'aaminta tilmaamaha kormeerka iyo hanti-dhawrka si loogu wargaliyo kormeerayaasha,
j) Go'aaminta muddada booqashada kormeerayaasha,
d) Go'aaminta shuruudaha lagu hubinayo midnimada iyo isuduwidda ficillada,
Soo jeedinta Guddoomiyaha Guddiga Kormeerayaasha waxaa lagu go'aamiyey ansixinta Maareynta Guud iyo Mabaadi'da Shaqada iyo Hannaanka Guddiga Kormeerayaasha ee ay go'aamiyeen go'aanka Guddiga Maamulka.
Xuquuqda aad heshay
Ku-meelgaarka ah Qodobka 1 - (1) on taariikhda laga soo galo ciidan xeerkan galay, xuquuqda leh ee Guddiga hawlahooda u soo noqday caawiyaha kormeerayaasha iyo kormeerayaasha Madaxtooyada hayaa.
(2) taariikhda laga soo galo ciidan xeerkan Guddiga hawlahooda u soo noqday caawiyaha kormeerayaasha iyo kormeerayaasha, kormeerayaasha iyo kaaliyaha kormeerayaasha waqti AnlArIndA in hay'adaha kale ee dawladda iyo TCDD Gaadiidka Inc. galay General Directorate of Guddiga Kormeerka tixgeliyo ee la soo dhaafay sida kaaliyaha kormeere iyo kormeerayaasha.
(3) taariikhda laga soo galo ciidan of this Regulation hawlahooda u Board 30 galay on kaaliyaha madaxa waardiyayaasha kormeere ee Madaxweynaha / 1 / 1992 taariikhaysan 21127 tiriyey Republic rasmiga ah ee Turkey, la daabacay ayaa lagu Gazette of General Tareennada State Agaasinka Gudaha Audit koraan in qodobada mawduucyada imtixaanka Regulation iyo aqoonta waxaa laga codsadaa.
MAGACA DHISMAHA XNUMKA - (2) Habraaca Shaqada iyo Mabaadiida Guddiga Baadhista waxaa la soo saari doonaa sannadka gudihiisa 1 laga bilaabo taariikhda dhaqan gelinta Nidaamkan.
QODOBKA 66 - (1) Xeerarkan wuxuu dhaqan gelayaa taariikhda daabacaddiisa.
ARTICLE 67 - (1) TCDD Taşımacılık A.Ş. Maamulaha Guud wuxuu fulinayaa.
Gaadiidka TCDD Agaasimaha Guud ee Guddiga Kormeerka Guud